K Pop Idol နဲ့ မတူပဲ ခွဲထွက်နေတဲ့ Kpop Idol Group တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KARD !!
On January 29, 2018 By Atsuko
Girl Idol group , Boy Idol Group တွေချည်းပဲ အားပေးနေရတဲ့ Kpop fan တွေအတွက် ထူးထူးခြားခြား Girl Idol ရော Boy Idol ရောပါ stan လို့ရတဲ့ K Pop Idol Group နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်လို့ပါ။ အဲဒါကတော့ KARD ပါ။ KARD ဆိုတာကတော့ Member ၄ယောက် – Girl Idol2ယောက်၊ Boy Idol2ယောက်စီနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပြီး 1st Mini Album Hola Hola နဲ့ ၂၀၁၇ ဇူလိုင် ၁၉ မှာ official debut လုပ်ခဲ့တဲ့ Idol Group တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Hola Hola သီချင်းဟာဆိုရင် Kpop Fan မဟုတ်တဲ့သူတွေတောင် “Ho ….la Ho…..la” လို့ လိုက်ဆိုချင်မိလာအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ EDM Stlye သွတ်လက်တဲ့ လူငယ်ပုံစံသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ Official debut မလုပ်ခင် ဧပြီ ၂၄ ကထုတ်ခဲ့တဲ့ KARD ရဲ့ “Rumor” သီချင်းဟာဆိုရင်လည်း United States, Singapore နဲ့ Australia တို့အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၃ နိုင်ငံရဲ့ iTunes Main Charts မှာ နံပါတ် ၁ နေရာကို ရယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၁ မှာ သူတို့ရဲ့ 2nd mini album “You & Me” ဟာဆိုရင်လည် Billboard World Albums chart မှာ နံပါတ် ၄ နေရာကို ရောက်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ Official debut မလုပ်ခင်ကတည်းက အောင်မြင်နေတဲ့ Idol Group တစ်ခုဆိုရင်လည်းမမှားပါဖူး။
Kpop Idol တွေလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ Cute type ဆိုပြီး ပြေးမြင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် KARD ကတော့ Cute type မဟုတ်တဲ့ Visual တွေ၊ ထူးခြားနေတဲ့ Vocal တွေ၊ MV တွေ ကအစ Strong ဖြစ်လွန်းလို Kpop Idol Group ဆိုတာကို ကျိမ်ပြောရတာမျိုးပါ။
Kpop Idol တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက သီချင်းဆိုတတ်ရုံ၊ အသံကောင်းနေရုံနဲ့လဲ Idol ဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါဖူး။ Kpop ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ အကပိုင်းကို ပိုင်နိုင်နေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ KARD ရဲ့ Dancing Skill ဆိုတာကရော? မေးစရာကိုမလိုတာပါ.. Girl Dance နဲ့ Boy Dance က Version မတူပေမယ့် Version မတူဖူးလို့ မခံစားမိပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီလှတာကို သူတို့ MV တွေမှာပါတဲ့ ကကွက်တွေမှာကြည့်ရှုခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေအပြင် စည်းလုံးလှတဲ့ Team Work ကိုလည်း သီချင်းတိုင်းမှာ အြပည့်အဝကိုတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ Member တစ်ဉီးချင်းစီရဲ့ သီချင်းအပေါ်တာဝန်ယူမှုတွေကလည်း သီချင်းကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ သိသာပါတယ်။ သူတို့တွေတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ vocal skill တွေကလည်း မချီးကျူးပဲနဲ့ကိုမနေနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ဘယ်သူက Main Vocal ဘယ်သူက Main Rapper ဆိုတာခွဲခြားလို့မရလောက်အောင်ကို Vocal ပိုင်းမှာရော Rap ပိုင်းမှာပါ ပိုင်နိုင်လွန်းလှပြီး unique ဖြစ်လွန်းလှပါတယ်။
KARD ရဲ့ Member တွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ KARD ရဲ့ Member တွေကတော့ J.Seph, B.M, Somin နဲ့ Jiwoo တို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ Follow လုပ်ထားလို့ရအောင် သူတို့ရဲ့ Instagram account တွေကိုပါအလင်းပြလိုက်ပါတယ်။
J.Seph – Instagram
B.M – Instagram
Somin – Instagram
Jiwoo – Instagram
PREVIOUS POST Previous post: အကြိမ် ၆၀ မြောက် ဂရမ်မီဆုပေးပွဲမှာ ဆုရရှိသွားကြသူများ
NEXT POST Next post: ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ကျော်တန် Cryptocurrency ခိုးယူမှုကြီးကြောင့် လစာမရဖြစ်နေရှာတဲ့ ဂျပန် Idol အဖွဲ့